2021 New Year ကို အိမ်မှာပျော်ပျော်ကြီးနွှဲဖို့ အတန်တကာ့အတန်ဆုံးစျေးနဲ့ရတုန်း ဝယ်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်း(၄)မျိုး – SUNNY Tech News
Posted byThet Su Lwin 16th Dec 2020 18th Dec 2020 Posted inUncategorized
စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ၂၀၂၀ ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ Ready ပဲလား? ဒီနှစ်ကတော့ New Year Celebration ကို အိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ပါးပါးဆင်နွှဲရမှာဆိုတော့ စိတ်တိုင်းကျကဲဖို့ လိုအပ်မယ့်ရိက္ခာတွေတော့ စုဆောင်းပြီးလောက်ရောပေါ့နော်။ ပိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင် ခုချိန်မှာဝယ်ရင် ထက်ဝက်စျေးနဲ့ရမယ့် electronic ပစ္စည်း (၄) မျိုးအကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်။
(1) Alpha Bluetooth Speaker
New year မှာ အရင်လို Live Show တွေမသွားရလို့ စိတမကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ Alpha Bluetooth Speaker က Live concert ထဲရောက်နေသလိုမျိုး sound effect အပြည့်အဝပေးနိုင်လို့ သီချင်းကိုအားရပါးရဖွင့်ပြီး ကခုန်နေလို့ရပါတယ်။ True Wireless Stereo စနစ်ပါဝင်ပြီး Bass သံအစစ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်ထဲမှာတင် Home party လုပ်ပြီး အပီဝုန်းလို့ရပြီနော်။
Alpha Bluetooth Speaker ကို ၅၀% လျှော့စျေးနဲ့ ဝယ်ယူဖို့အတွက် ဒီကို နှိပ်ပါ။
(2) XO GE01 Headphone
ကမ္ဘာကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲသွားရင်တောင် Game ဆော့လို့ရတဲ့ဘက်မှာနေမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် အလိုအပ်ဆုံးက Headphone! ၂၀၂၀ကနေ ၂၀၂၁ ကို ဆော့ရင်းဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဆူညံသံတွေကိုခေါက်ထားပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံထွက်နဲ့ သက်တောင့်သက်သာဆော့လို့ရဖို့ GE01 Headphone ရှိပါတယ်။ 3.5 mm audio jet pin ၂ခု နဲ့ ကြိုးအရှည် 2000mm တောင်ပါတာဆိုတော့ ညလုံးပေါက် အေးဆေး Rank တင်လို့ရပြီပေါ့။
XO GE01 Headphone ကို ၅၀% လျှော့စျေးနဲ့ ဝယ်ယူဖို့အတွက် ဒီကို နှိပ်ပါ။
(3) Alpha 24”LED TV
ဒါကတော့ TV ရှေ့မှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း beer လေးနဲ့ chill မယ့်သူတွေအတွက်ပါ။ ရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ HD resolution နဲ့ Stereo box speaker ပါရုံတင်မကပဲ External audio ထုတ်ဖို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေ၊ USB Plug and Play လည်းပါတယ်ဆိုတော့ ဒီစျေးနဲ့ရနေတုန်းမှာ လုံးဝဝယ်ထားသင့်တဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းပါပဲ။
Alpha 24”LED TV ကို ၄၀% လျှော့စျေးနဲ့ ဝယ်ယူဖို့အတွက် ဒီကို နှိပ်ပါ။
(4) Xiaomi POCO F1
ဒီနှစ်မှာတော့ နှစ်သစ်ကိုဘယ်လိုကြိုဆိုနေပါတယ်ဆိုတာကို ဝေးကွာနေတဲ့ မိသားစုတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူ video call ကနေတစ်ဆင့် မျှဝေခံစားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ AI Dual Camera အပြင် 20MP front camera ပါတဲ့ POCO F1 နဲ့ဆိုရင် ကြည်လင်ပြတ်သားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ရပြီပေါ့။ Processor ကလဲ Snapdragon 845 နဲ့ 4000mAh battery ဆိုတော့ တစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးသုံးလဲ ဖုန်းဟမ်းသွားမှာ၊ အားအမြန်ကုန်မှာမပူရဘူး။
Xiaomi POCO F1 ကို ၄၀% လျှော့စျေးနဲ့ ဝယ်ယူဖို့အတွက် ဒီကို နှိပ်ပါ။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးဝင်တဲ့ Gadget (၅)မျိုး